Gufgaf|Online प्रदिपलाई फाप्ला लभस्टेशन ?
प्रदिपलाई फाप्ला लभस्टेशन ?
गफगाफ - पछिल्लो समय चर्चामा आइरहने अभिनेता मध्यका एक प्रमुख पात्र हुन् नायक प्रदिप खड्का । प्रेम गीत बाट चलचित्र नगरिमा उदाएका प्रदिप बेला बखतमा चर्चामा आइरहन्छन् । कहिले नायिका पुजा शर्मा सँगको सम्वन्धका कारण त कहिले भने जत्ती पैशा पाए जस्तो चलचित्रमा अभिनय गर्न समेत राजि भएको कुराले चर्चा पाउने गरेको छ । यसै बिच फेरि पनि उनि चर्चामा छन् । उनको चार्चको कारण हो चलचित्र भैरवी । सम्झौता गरिसकेर पनि धोका दिएका कारण चलचित्र भैरवी बाट उनलाई आउट गरिएको खवरले यतिवेला चर्चा पाइरहेको छ । यता प्रदिप भने चलचित्र लभस्टेशनमा व्यस्त छन् । उनि आफैले चलचित्रको निर्माण गर्न लागेको बुझिएको छ ।
उनले डेव्यु गरेको चलचित्र प्रेमगीत र प्रेमगीत २ ले राम्रै चर्चा पायो तर उनै अभिनेता प्रदिप खड्काले अभिनय गरेका चलचित्र लिलिबिली र रोज दुबैले त्यति राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन् । चलचित्र लिलिबिली भने हलमा औषत चलेको थियो । र चलचित्र रामकाहानी सगै प्रदर्शनमा आएको चलचित्र रोज भने बक्स अफिसमा असफल साबित भयो । प्रदिपको करिअरको सबैभन्दा घातक निर्णय नै रोज बन्न पुगेको छ भन्दा फरक नपर्ला । यसैले रोजबाट पाएको असफलताको ट्यागलाई केहि पर सार्दै चलचित्र लभ स्टेशनको तयारीमा लागेका छन् । प्रदिप खड्कालाई दर्शकमाझ चिनाएको र स्टार बनाएको चलचित्र प्रेमगीत र प्रेमगीत २ हो ।
यस सगै यतिबेला प्रेम गीत ३ बन्न लागेको बताइएको छ । यतिबेला प्रेमगीत ३ मा को हिरो होला बन्ने चर्चा चल्न थालेको छ । प्रेमगीत ३ मा प्रदिप हिरो नहुने भन्ने हल्ला पनि छ । प्रदिप खड्काको बिषयमा अहिले नै निर्माता सन्तोष सेनले कुनै निर्णय नै गरेका छैनन् । तर, प्रदिप र सन्तोष विच असमझदारी भने बढ्दै गएको बताउछन् चलचित्र पण्डितहरु । उनले स्विकार गरुन् या नगरुन् तर प्रदिपलाई स्टार र महंगो अभिनेता बनाएको प्रेमगीत ब्रान्डले नै हो । लिलिबिलीले उनलाई खाश फाइदा भएन तर घाटा पनि भएको थिएन । तर रोजले भने उनलाइ घाटा नै भयो । यति बेला उनि त्यहि घाटालाई पुर्ती गर्नका निम्ति लागी परेका छन् । प्रदिपलाई रोजको असफलता पूर्ती गर्नका लागि लभ स्टेशनले काम गर्ला ? या त प्रेमगीत ३ नै चाहिएला ? त्यो भने समयले बताउने छ ।